Tsy ny tafika no nampiasa ireo fitaovana ireo, hoy izy, fa toa ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Raha ny loharanom-baovao efa nentina teto moa dia tsy araka ny nantenaina ny vokatra azo tamin’ireo fiara tsy laitram-bala miisa roa ireo satria tsy dia mahazaka loatra ny toe-tany sy ny toetran’ny lalana handehanana amin’ny fanenjehana dahalo, izay miafina any an-tendrombohitra na havoana. Tany Ihosy sy Betsiboka no anisan’ny toerana nandefasana azy. Azo antoka fa ho hita etsy Mahamasina amin’ny 26 jona izao satria ny iray dia efa nakarina tamin’ny renivohitry ny faritra nampandalovina fanamboarana sy fikojakojana mialoha ny hampiakarana azy aty, raha ny loharanom-baovao. Amin’io ihany koa no mety hahazo fiara vaovao marobe ny mpitandro filaminana, ka ho hita eo ny fitsinjarany.